Hotel(Hotel) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
आईपीओ जारी गरेको ६ महिनामै अमेरिकी सेयर बजारबाट बाहिरिँदै ‘दिदी’, हङकङमा सूचीकृत हुने
नेपाल एसबिआई बैंकद्वारा जानकी मन्दिरलाई क्यूआर कोड र पीओएस मेसिन हस्तान्तरण
सिटिजन्स बैंकका कार्डवाहकले होटेल सिटिपार्कमा विशेष छुट पाउने
नेपालमै पहिलोपटक ‘साइबर सेक्युरिटी एन्ड डिजिटल फरेन्सिक’ विषयको पढाइ द ब्रिटिस कलेजमा
काठमाण्डौ । विगतमा भएका सम्झौताबमोजिम सेवासुविधा नपाएको भन्दै कर्मचारी र मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएपछि विगत पाँच दिनदेखि काठमाडौँको बौद्धस्थित पाँचतारे होटल हायात रिजेन्सी बन्द छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर संघले सुरु गरेको आन्दोलनका कारण हायात रिजेन्सी ठप्प रहँदा पनि समस्या सुल्झाउन...
-सिवी अधिकारी पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि महत्वपूर्ण आधारका रुपमा रहेका होटल व्यवसायमा पछिल्लो समय लगानी बढेर गएको छ । चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेशनजस्ता प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह होटल व्यवसायतर्फ आकर्षित भएका छन् भने हिल्टन, मेरियट, सेराटनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल रहेका ठूला कम्पनीले पनि नेपालमा लगानी...
दरबारमा मार्गमा खुल्यो किङ्स लाउञ्ज
काठमाण्डौ । नयाँ बर्ष २०७५ को अवसर पारेर राजधानीको दरबारमार्गमा अत्याधुनिक फेमिली रेष्टुरेन्ट ‘किंङस् लाउञ्ज’ सञ्चालनमा आएको छ । संगीतका साथै स्वेदेशी तथा विदेशी खानाका पारखीहरुलाई ध्यानमा राखेर पूर्ण पारिवारिक वातावरणमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याईएको हो । विभिन्न पेशा र व्यवसायमा आबद्ध केही युवाहरुको सामूहिक लगानीमा...
खुकुलो मापदण्डपछि होटलमा लगानी बढ्दै
-रमेश लम्साल/सिबी अधिकारी काठमाडौँ । सरकारले पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि होटल व्यवसायमा खुकुलो मापदण्ड तय गरेपछि पछिल्लो दिनमा सो क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरु बढ्दै गएका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार पर्यटन क्षेत्रको महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रुपमा रहेको होटल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्टको संख्या बढेर एक हजार २०० पुगेका छन् । यस्तै...
सोल्टी होटलका साधारणसभा मंसिर २८ गते, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । सोल्टी होटल लिमीटेडले आफ्नो ४३ औं वार्षिक साधारणसभा आगामी मंसिर २८ गते आह्वान गरेको छ । कम्पनीले सुन्धारास्थित त्रिभुुवन आर्मी अफिसर्स क्लबमा साधारणसभा आह्वान गरेको हो । साधारणसभामा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक प्रतिवेदन पारितको प्रस्ताव पेश हुनेछ । यस्तै, कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष...
राजधानीमा खुल्यो तारे होटल स्तरको ट्रेनिङ सेन्टर
काठमाण्डौ । कोटेश्वरको बालकुमारी पुलसँगै बहुउपयोगी तारे होटलस्तरको आईसीए ट्रेनिङ्ग सेन्टर संचालनमा आएको छ । सेन्टरले थ्री स्टार होटल स्तरीय सुविधा ननस्टार(न्यूून) शुल्कमा उपलब्ध गराउने पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ । कम्प्लेक्समा १५ देखि १ सय जनासम्म अटाउने ६ वटा हल छन् । सेन्टरका हरेक हलमा भिडियो कन्फरेन्सिङ सुविधा छ ।...
लगानीकर्तालाई सोल्टी होटलको डबल अफर
काठमाण्डौ । सोल्टी होटल लिमीटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर र ११.०५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको घोषणा गरेको छ । शुक्रबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा प्रकाशित एक सूचनाका अनुसार २०७३ मंसिर ९ गते बसेको बोर्ड बैठकले सेयरधनीलाई बोनस सेयर र नगद लाभांश वितरणको निर्णय गरेको हो । यो निर्णय कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित...
कुश्मा बजारमा ९ करोडको होटल संचालन
फलेवास (पर्वत) । सदरमुकाम कुश्माबजारमा नौ करोड रुपैयाँको लगानीमा सुविधा सम्पन्न होटल सञ्चालनमा आएको छ । स्थानीय व्यवसायी विषयमकुमार श्रेष्ठले छ करोडको जग्गा र तीन करोडको लागतमा सुविधा सम्पन्न होटल बेन्जु सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । सुविधा सम्पन्न होटल नहुँदा धौलागिरि क्षेत्रमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको गन्तव्य बन्न नसकेको...
इटहरीमा ५० करोड लगानीमा तारे होटेल बन्दै, एकवर्षभित्र संचालन
काठमाण्डौ । स्थानीय चार व्यवसायीहरुको संयुक्त लगानीमा सुनसरीको इटहरीमा ५० करोड रुपैयाँको लगानीमा तारे होटलको निर्माण कार्य द्रूत गतिमा अगाडि बढेको छ । गोरखा डिपार्टमेन्ट स्टोरका संचालक बलराम आचार्य, हार्डवेयर व्यवसायी तथा उद्योगी सुनिल अग्रवाल, निर्माण व्यवसायी भीम पौडेल र स्वास्थ्य व्यवसायी कृष्ण नेपालको संयुक्त लगानीमा...
नेप्सेको आईटीकै कर्मचारी भित्री कारोबारमा संलग्न रहेको आरोप, कारबाहीको माग गर्दै उजुरी
सेबोनको पाइपलाइनमा ७ कम्पनीका हकप्रद, कसको कति ?
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एजीएमबाट १६% लाभांश अनुमोदन
बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरको आरटीएसमा सिद्धार्थ क्यापिटल नियुक्त
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको २७ हजार बढी कित्ता सेयर लिलामीमा राखिने
सिटिजन्स बैंक : 'जतिसुकै चानचुन भए पनि बचत गरे एक न एक दिन काम लाग्छ' (सन्देशमूलक भिडियोसहित)
कक्षा १२ को परीक्षाफल नेपाल टेलिकमको वेबसाइट, सन्देश र आइभिआरमार्फत थाहा पाउन सकिने
ओमिक्रोनको संक्रमणबाट कसरी बच्ने ? अपनाउनुस् यी वैज्ञानिकले सुझाएका यी ६ सरल उपाय
नेप्सेको गम्भीर लापरबाही, वेबसाइटमा घन्टौँसम्म गलत तथ्यांक !